याैन सम्बन्धी केहि राेचक कुराहरु!!! « Np Online TV
याैन सम्बन्धी केहि राेचक कुराहरु!!!
याैन सम्बन्धी केहि राेचक कुराहरु:
– ५० जनामध्ये एक महिलामा अतिरिक्त स्तनको निप्पल हुने गर्छ ।
– अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै चरमसुख भएको रेकर्ड एक महिलालाई एक घण्टामा १३४ पटक भएको छ भने पुरुषमा १६ पटक भएको पाइएको छ ।
– विश्वभरमा ग्रिसमा मानिसहरु सबैभन्दा सेक्सीमा पर्छन् । उनीहरु अधिकांशले हप्तामा एकपटक सम्भोग गर्ने गर्छन् ।
– विश्वमा दैनिक १ करोड सम्भोग हुन्छन् । तपाईंले यो शब्द पढिरहँदा ६५ हजार दम्पत्तीहरु सम्भोग गरिरहेका हुन्छन् ।
– एक चम्चा वीर्यमा सात क्यालोरी हुन्छ ।
– क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले घरमा श्रीमतीलाई सहयोग गर्ने पुरुषहरुले ५० प्रतिशत बढी सम्भोगको अवसर पाउने पत्ता लगाएका छन् ।
– मूर्ति या म्यान्निक्विनप्रति हुने सम्भोग आकर्षणलाई एजाल्माटोफिलिया भनिन्छ ।
– सम्भोगप्रतिको निष्क्रियताले लिंगको आकार पनि घटाउँछ । रुसकी महिला तात्याना कोजेभ्निकोभाले योनिले १४ केजी तौल तानेर रेकर्ड बनाएकी थिइन् ।
– वीर्यमा भएको प्रोटिनले चाउरी निको पार्छ
– दुईवटा कण्डम लगाउँदैंमा थप सुरक्षा दिने भन्ने हुँदैंन, बरु आपसी घर्षणले फुट्न सक्छ ।
-सम्भोग तनाव निवारक औषधि पनि हो । सम्भोगको बेला उत्सर्जन हुने रिल्याक्सिंग हर्मोनका कारण ब्लड प्रेसर कम हुन्छ र मूड पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले सम्भोगले टाउको दुखेको तथा तनाव जस्ता कुरा शान्त गरिदिन्छ ।
– इरानमा वेश्यावृत्ति कानुनी छ, जहाँ पैसा तिरेर केही घण्टाका लागि अस्थायी श्रीमती पाइन्छ ।
– पुरुषको दुईवटा अण्डकोषमध्ये एउटा अलि तलतिर रहेको हुन्छ । यसको कारण हो– हिड्दा तिनीहरु आपसमा नठोक्किउन् ।
-सन् २०१२ मा भएको एक सर्भेले ६० प्रतिशत बेलायतीहरु अध्याँरोमा सम्भोग गर्न मन पराउँने देखाएको थियो ।
– अहिले विश्वभर प्रचलित खाद्यपदार्थ केलोग्स कर्नफ्लेक्स एक त्यस्ता व्यक्तिले विकास गरेका थिए, जो ह*स्तमैथु*नविरु*द्धका अभियन्ता थिए । उनले मानिसबाट सम्भोग विचार हटाउँन स्वस्थ खाना आवश्यक रहेको भन्दै कर्नफ्लेक्सको विकास गरेका थिए ।
– एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट के देखाएको छ भने स्पेन, ब्राजिल र इटालीका महिलाहरुले उत्कृष्ट लभर उत्पादन गर्छन् । अंग्रेजहरु भने ज्यादै अल्छी हुन्छन् ।
-प्राचिन चीनमा सम्भोगपछि मक्र्युरी र सिसा खाएमा गर्भ रहँदैंन भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । तर, यसले मृ*त्युसम्म निम्त्याउथ्यो ।
– एक स्वस्थ पुरुषले एक हप्तामा यति धेरै शुक्रकिट स्खलन गर्न सक्छ की त्यसले विश्वका सबै महिलालाई गर्भाधारण गर्न पुग्छ ।
-अध्ययन अनुसार हप्तामा कम्तिमा पनि तीन पटक सम्भोग गर्ने मानिसहरुमा बुढोपनाले छिटै सताउने समस्या कम हुन्छ ।-पुरुषको विर्य बाहिर निस्किएसँगै विर्यमा रहेका शुक्रकिट बाहिरी वातावरणमा केही सम्म मात्र बाँच्न सक्छन् तर यदि विर्य महिलाको याै*नीभित्र प्रवेश गर्यो भने तीन देखि पाँच दिनसम्म बाँच्न सक्छन् ।